LSR & Rubha kugadzirwa - Chapman Technology Co., Ltd.
Chapman Muiti inokwanisa kupa yakasarudzika emhando yepamusoro kudzora maitiro anodikanwa nehutano hwehutano uye ekurapa michina maindasitiri. Chapman Muiti iri ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 / NS-EN uye ISO 123485: 2016 yakasimbiswa, uye isu tinozvirumbidza imwe yemitengo yakaderera kwazvo muindasitiri yedu.
Chapman Muiti's ISO-yakasimbiswa Kirasi 8 yekuchenesa, pamwe nehanzvadzi kambani NKS Kirasi 7 yekuchenesa muSingapore inodzivirira kusvibiswa kubva muguruva uye nezvimwe zvinofurwa nemhepo uye inosangana neiyo ISO zviyero zvakakosha mukugadzira kwehutsanana.
Somumwe Global Premier jekiseni Kuumbwa makambani, Chapman Muiti inoshanda chete nemvura yesilicone yerabha jekiseni kuumbwa. Tine hunyanzvi hwekugadzira kupa masevhisi anotangira pakuratidzira kusvika kugadzirwa kwesiriidhi yezvinhu zvakanyatsonaka. isu tinogadzirisa yedu QA maitiro ekuzadzisa ako chaiwo zvaunoda.